स्थानिय स्तरमा जन प्रतिनिधि छान्न पाए तर स्वायत्तता पाउन सकेन | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
स्थानिय स्तरमा जन प्रतिनिधि छान्न पाए तर स्वायत्तता पाउन सकेन
करिब वीस वर्षको अन्तरालमा जनताले जनप्रतिनिधि छान्न पाए खुसीको कुरा हो तर स्वायत्तता पाउन सकेन दुःखको कडी हो । निर्वाचन सरसर्ती हेर्दा जनताको लागि छानिएका छन् जनताबाट तर अहिलेका स्थानिय निकाय प्रतिनिधिहरुले प्रथम आफ्नो पार्टीको हितमा काम गर्ने छन् त्यसपछि जनता तर्फ छानी छानी हेर्ने छन् ।
जनताले स्वतन्त्रता पाउन सकेको छैन । गाउँ स्तरको निर्वाचनमा केन्द्रिय स्तरका नेताहरुबाट स्थानिय प्रतिनिधि बन्न अनुमति दिने हो भने सोच्नुहोस् कहाँनेर स्वायत्तता, विकेन्द्रित राजनीति रह्यो । स्थानिय निर्वाचन हुदा शिखा समाती पार्टी प्रमुखले कन्ट्रोल गर्छ भने यो स्थानिय निर्वाचनले जनतामा विकेन्द्रित अधिकार आयो कि पार्टीहरु द्वारा जनतालाई लगाम लगाउन खोज्नु । जो स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने उनी सर्वमान्य हुन सक्छन् तर पार्टीहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दबाउने प्रयत्नरत रहे भने के भन्ने । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई यदि जनताले मत दिन्छन् र छनौट हुन्छ भने त्यो व्यक्ति मात्र सबै जनताको साझा व्यक्ति हुन सक्छ तर पार्टी पार्टीबाट उम्मेदवार भएकाहरुले जसले जित्छ उसले पार्टीको गुणगान गाउनेछ र जसले जे भने पनि पार्टी कै हितको लागि नै काम गर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्तर वा प्रान्त स्तरमा राजनीति आस्थालाई बोकेर मत माग्नु र दिनु पार्टी सिष्टममा ठीक भएपनि गाउँघरमा पार्टीहरुले आफ्नो हैकमवाद लाद्न खोज्नु प्राकृतिक अपराध हो तर कसले सुन्ने ? जब नेपालका गाउँगाउँमा पंचायतको प समेत हटाई भारतले आफ्ना गाउँ गाउँ सम्म जनताका अधिकार पंचायतराज दिएको छ । कुनै पार्टीले देखादेखी हस्तक्षेप गर्न सक्तैन ।
नेपालको स्थानिय निकायलाई राजनीतिक पार्टीहरुका प्रचारक संस्था बन्न पुगेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष हितमा जान सक्तैनन् । जनताको लागि निष्पक्ष भई काम गर्ने अधिकार स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जनताले छान्न पाए र छान्न दियो भने उसैलाई हुनेछ । ऊ स्वाभिमानी हो हामी सित संबैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था अल्प ज्ञानले त्यस्तै बनाएपनि दीघार्यु भने अवश्य हुनेछैन ।
स्थानिय सरकार, प्रान्तिय सरकार र केन्द्रिय सरकार सित प्रत्यक्ष सम्पर्क रहनु पर्छ । छोटो अवधिको दरबियानमा देशका राजनीतिक पार्टीहरु जनताको नाममा पार्टी तथा व्यक्तिहरुको हितमा रहेका छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । जनतालाई सम्पूर्ण अधिकार सौपेका छौं भन्ने नेताहरुले जनतालाई स्वतन्त्र रहन दिन किन सकेनन् ? स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको भन्दा पनि आफ्नो गुणगान गाउनमा प्रयोग गर्नु जनताका अधिकार खोसेका हुन् कि होइन ? सामाजिक सद्भाव कसरी भत्कियो नेताहरुलाई थाहा छ कि छैन ?
देशमा न सामाजिक सद्भाव रह्यो न ऐन नियम बमोजिम काम गरी कानूनी राज्यको स्थायित्व रह्यो भने कसरी चल्छ देश ? ऐन नियम सबैले मान्नुपर्छ । सरकार र नेताले नमान्ने भन्ने छैन । प्रमाणको लागि २०४७ को संविधानको पालना नगरेझैं २०७२ को संविधानको पनि पालना भएको हामी पाउँदैनौं ।
गाउँ स्तरमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि होइन कि पार्टी प्रतिनिधि छान्ने सकुनी षड्यन्त्र भएको छ । जनता आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान गुमाउने कुचक्रमा फस्न पुगेका छन् । पूर्ण स्वतन्त्रताको पूर्ण पहिचान गरी स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको लडाई अवश्य चल्ने छ र जनताले सफलता पाउनेछन् । ग्रामीण स्तरमा जनताले प्रत्यक्ष पार्टीहरुको दासत्वबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
← देशमा दुई थरीका मानिस छन्
तीनै माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा ! →